China Corneal surface curvature uye diopter yekuyera chiridzwa YZ38 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Corneal pamusoro yakakombama uye diopter yekuyera chiridzwa YZ38
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa kuyera kukombama uye diopter yeiyo corneal pamusoro, pamwe neaxial uye astigmatism yeiyo corneal astigmatism. Inogona kushandiswa kuverenga simba rekutsvaira remwenje yakaiswa pamwe chete neA-scan. Unyanzvi parameter Kuyera renji Curvature radius 5.5, 11mm Diopter 30- 60D * Diki yekupedza kukosha kukosha radius 0.02mm Diopter 0.25D Inodiwa hushoma nzvimbo yenzvimbo yekuyera r = 5.5mm -1.65mm r = 7.5mm -2.36mm r = 11mm -3.36mm
1. Panguva yekukodzera kwema lenzi, iyo yakakomberedza lenzi inogona kusarudzwa zvinoenderana neredhiyo yekukomberedza kwemameridani makuru epamberi peiyo cornea yemutengi.
Mukusarudza iyo yakakomberedza lenzi, iyo curve yelensi yakaenzana kana kuti yakati kurei kupfuura iyo nharaunda yekukomberedza kwemameridani makuru epamberi peiyo cornea. Iyi fomula inotevera inogona kushandiswa kuwana:
BC = iyo chiyero cheiyo radii yekukomberedza kwemaviri akafanana perpendicular main meridians / 2 × 1.1
Semuenzaniso, iyo curvature radii yemaviri makuru meridians ayo akaenzana kune mumwe nemumwe anoyerwa kuve 7.6 uye 7.8.
2. Kuongorora kwekusimba kwema lenzi mushure mekupfeka.
Paunenge uchiyedza, ita kuti iye akapfeka abheneke. Kana iye akapfeka akanyatso kusakara, chiratidzo chekuona chichagara chakajeka uye chisina kuchinjika;
Kana ikapfekedzwa zvakasununguka, mufananidzo uchave wakajeka usati wabhenekera, uye mufananidzo uchave wakasviba pakarepo mushure mekubwaira, uye uchajekeswazve mushure mechinguva;
Kana yakapfekedzwa zvakanyanya, mufananidzo uchave wakajeka usati wabhenekera, uye blur ichadzorerwa kwechinguva.
3. Keratometer inogona kushandiswa kuona mwero we astigmatism, axial direction uye kusiyanisa mhando ye astigmatism.
Kana paine astigmatism mu optometry, shandisa keratometer kuti uone astigmatism, zvichiratidza kuti astigmatism ndeye intraocular astigmatism.
Kana paine astigmatism mu optometry, astigmatism inoonekwawo nekeratometer, uye iyo astigmatism yevaviri yakaenzana, uye axial direction yakafanana, zvichiratidza kuti astigmatism yeziso zvese corneal astigmatism.
Kana iyo astigmatism iri mu optometry haina kuenzana ne astigmatism inowanikwa ne keratometer uye axial direction haina kuenderana, zvinoreva kuti iyo astigmatism musanganiswa we corneal astigmatism uye intraocular astigmatism.
Kana pasina astigmatism mu optometry, shandisa keratometer kuti uone astigmatism, zvinoreva kuti madhigirii e corneal astigmatism uye intraocular astigmatism akaenzana, uye zviratidzo zvakatarisana, axis yakafanana, uye vaviri vanodzima kunze. Iyi astigmatism inogona kugadziriswa nechitenderedzwa lens.
4. Kune zvimwe zvirwere zvemakona zvakaita sekeratoconus, keratoconus, nezvimwewo, keratometer inogona kushandiswa sehwaro hwekuongorora. Kuyerwa kwechiyero chekuisirwa pamberi peiyo intraocular lens kudyara uye dhizaini uye mhedzisiro kuongororwa kweakasiyana maitiro eanodzora anoda kuyerwa kwekeratometer. Uye zvakare, iwe unogona kudzidza nezvekuvanzika kwemisodzi uye zvichingodaro.
★ Radiyo yekukombama
Minimum kudzidza kukosha
Nzvimbo yepasi inotarisirwa kuyerwa
Kana r = 5.5mm
Kana r = 7.5mm
Kana r = 11mm
Pashure: Corneal curvature mitaBL-8002
Zvadaro: Yakazara otomatiki emakomputa ekutarisa mitaFL-800